निर्धन उत्थान लघुवित्तको खुद नाफा रु. २१.६३ करोड, गत वर्षभन्दा ४३.४८%ले बढी
काठमाण्डौ । निर्धन उत्थान लघुवित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४३.४८ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाले २१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष संस्थाले १५ करोड ७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो...
स्वाबलम्बन लघुवित्तको खुद नाफामा ४२.४७%ले बढोत्तरी, प्रतिसेयर आम्दानी रु. ७७.६२
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अधिकांश वित्तीय सूचकमा छलाङ मारेको छ। प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९१.७ प्रतिशतले ४२.४७ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ । समीक्षा अवधिमा संस्थाले १२ करोड २० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष...
विजय लघुवित्त प्रगतिपथमा, खुद नाफामा १९१.७%को छलाङ
काठमाण्डौ । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९१.७ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ । सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाले २ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष संस्थाले ७७ लाख १३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको...
सिद्धार्थ बैंकको खुद नाफा थोरै घट्यो, रिजर्भमा पनि १.२२%को गिरावट
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा खुद नाफा घटेको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो वर्ष ०.६९ प्रतिशतले घटेको हो । समीक्षा अवधिमा यो वर्ष बैंकले ५२ करोड १४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा बैंकले ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन...
प्रगतिपथमा कालिका लघुवित्त, खुद नाफामा ५०२.४९%को छलाङ, रिजर्भमा ८०.१२%ले वृद्धि
काठमाण्डौ । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५०२.४९ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ । सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाले ७४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा संस्थाले १२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा...
सबै वित्तीय सूचकमा सनराइज बैंकको प्रगति, खुद नाफामा ३७.०६%को छलाङ
काठमाण्डौ । सनराइज बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा ३७.०६ प्रतिशतले खुद नाफा कमाउन सफल भएको छ । प्रमथ त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा बैंकले ३३ करोड १४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा १५ करोड ८३ लाख...
नेपाल बैंक लिमिटेडको खुद नाफा ३६.३३%ले घट्यो, अधिकांश वित्तीय सूचकमा गिरावट
काठमाण्डौ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा ५८ करोड १८ लाख रुपैयाँ खुद नाफामा आर्जन गर्न सफल भएको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार यो खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३६.३३ प्रतिशतले कम हो । गत वर्ष यही अवधिमा बैंकले ९१ करोड ३८ लाख खुद नाफा कमाउन सफल भएको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको...
अधिकांश वित्तीय सूचकमा मेरो माइक्रोफाइनान्सको प्रगति, खुद नाफामा ५५.९२%को छलाङ
काठमाण्डौ । मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५५.९२ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाले ४ करोड २७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष संस्थाले २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको...
अधिकांश वित्तीय सूचकमा सारथि लघुवित्तको उन्नति, खुद नाफामा ६३७%को छलाङ
काठमाण्डौ । सारथि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा ८७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । प्रथम वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफामा ६३७ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो । गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले ११ लाख ९२ हजार रुपैयाँमात्र खुद नाफा आर्जन गरेको थियो...
प्रथम त्रैमासमा युनिक नेपाल लघुवित्तको खुद नाफा रु. १.७१ करोड
काठमाण्डौ । युनिक नेपाल लुघवित्तय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाको सञ्चालन मुनाफा ८६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै संस्थाले खुद ब्याज आम्दानी ५ करोड १६ लाख रुपैयाँ गर्न सफल भएको छ । यसले...
सबै वित्तीय सूचकमा साधना लघुवित्तको छलाङ, खुद नाफा ४१३.२४%ले वृद्धि
काठमाण्डौ । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा खुद नाफामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१३.२४ प्रतिशतले छलाङ मारेको छ । सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाले ७६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष संस्थाले १४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन...
नेरुडे लघुवित्तको खुद नाफामा १७१.७४% को छलाङ, इपीएस रु. २७.१३
काठमाण्डौ । नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७१.७४ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाले २ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष संस्थाले ९९ लाख २३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो...
फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सको प्रथम त्रैमासमा यस्तो छ प्रगति
काठमाण्डौ । फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.१६ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ । सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाले ८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष संस्थाले ८ करोड ४ लाख रुपैयाँ...
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा खुद नाफामा ४०.५५% को छलाङ
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा खुद नाफा ४०.५५ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ । बैंकको प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत वर्ष यही अवधिमा ५३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । बैंकले समीक्षा अवधिमा वितरणयोग्य...
प्रथम त्रैमासमा नयाँ नेपाल लघुवित्तको खुद नाफा झन्डै सतप्रतिशत वृद्धि, रिजर्भमा १४४% को छलाङ
काठमाण्डौ । नयाँ नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा खुद नाफा ९३ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सफल भएको छ । संस्थाले सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाले ४२ लाख ३५ हजार खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । जुन गत वर्ष यही अवधिमा २१ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा सीमित थियो । संस्थाको सञ्चालन...